Gọọmenti ala Naịjiria akatọọla ọgụ ịkpa oke ahụ a na-abusa ndị mmadụ na mba Sautu Afrịka
Previous Article Izu agba aka, Voice of Nigeria, Eprel 18
Next Article Gọọmenti ala Naịjirịa na-ekwe nkwa n’ a ga-enwe nchekwa n’oge ntụli aka
Gọọmenti ala Naịjiria ekpebiena n’ọgụ ịkpa oke ahụ a na-abusa ndị mmadụ na mba Sautụ Afrịka bụ ịhe ọjọọ. Naịjiria kpọrọ gọọmenti Sautu Afrịka ka o mee ihe kwesiri ekwesi, gbaa mbọ hụ n’a kwụsịrị ọgụ ahụ a na-ebusa ndị ọbịa na mba ahụ.
Ministrị na-ahụ maka ihe gbasara mba ọzọ kwuru nke a n’Abuja n’ ụbọchị Fraịdee. Anyị nụrụ n’onye isi ala mba Sautu Afrịka ejirigo ọnụ ya kwupụte n’ọgụ ịkpa oke ahụ ndị mba ya na-ebusa ndị ọbịa ezighị ezi chaa chaa.
Otu jikọtara mba Afrịka, bụ ECOWAS n’aha ịchafụ, akpọla oku ka mba Sautu Afrịka kwụsị ụdịrị akparamagwa ọjọọ ahụ. Presidenti John Dramani ekwuona n’ịkpa oke, yana ibu agha agbụrụ abụghị ịhe ziri ezi. Ọ kpọkuru gọọmenti mba Sautu Afrịka ka ha were ọsọ were ije mee ka ndị mba ahụ kwụsị ibu agha megide ndị ọbịa bi na mba ha.